US bara 2003 as yeroo jalqabaaf namoota shan du'aan adabuuf - BBC News Afaan Oromoo
US bara 2003 as yeroo jalqabaaf namoota shan du'aan adabuuf
Mootummaan Ameerkaa namoota du'aan adabuu kan waggaa 16'f dhaabdee turte deebitee labsuu ishee Dameen Haqaa biyyattii beeksise.
Abbaan Alangaa Walii Galaa US William Barr namoota shan du'aan adabuuf sagantaan akka qabame Biiroo Manneen Hidhaa biyyattiif ibsaniiru.
Akka William Barr jedhanitti namoonni shanan kunneen yakka jajjaboo kanneen akka daa'immanii fi jaarrolee gudeeduu fi haala suukanneessaan ajjeesuu raawwatanii kanneen himatamaniidha.
Namoota kunneen du'aan adabuuf sagantaan gaafa Muddee 2019 fi Amajjii 2020tti qabameera.
Biyyoota meeqatu seera adabbii du'aa qaba?
Kutaan bulchiinsa Waashington seera adabbii du'aa hambiste
Ibsi Abbaa Alangaa William Barr kun seera du'aan anama adabsiisu kan sadarkaa federaalaatti ture garuu kan yeroof dhaabbatee ture iddoosaatti deebiseera.
Ameerkaan erga bara 2003 nama waggaa 53 waraana Galoo Galaanaa( Gulf War) keessa ture Louis Jones Jr kan miseensa humna waraanaa ganna 19 Tracie Joy McBride qaluun ajjeese du'aan adabdee as seera adabbii du'aa dhaabdee turte.
Giddu gala odeeffannoo waa'ee seera adabbii du'aa keessa kan hojjetan Robert Dunham ibsa abbaa alanagaarraa kenname kana akka waan ajaayibaatti hin ilaalu jedhan.
"Pirezidaanti Tiraapi adabbii gurguddaa akkanaa dabarsuu baay'ee deggeru. Namoota daddabrsa qorichoota sammuu namaa adoochan keessatti hirmaatanii fi qondaaltota mootummaa fi poolisoota biyyattii ajjeesanirratti adabbii du'aa dabarsuu ni barbaadu turan.
Kanaafuu kun waan nama ajaayibu miti. Durumaanuu fedhiin isaa jira. Kan nama ajaayibu akkuma kanaan duraa yeroon itti raawwatamu dheerachuudha''
Dhaabbati mirga lammiileef quuqamu 'AmericanCivil Liberties Union (ACLU)' jedhamu ammoo namoonni yakka garagaraa hojjetan yeroo tokkotti du'aan adabuuf beellamamuun sirrii miti jedheera.
Akka seera adabaa US'tti yakki mootummaa naannolee fi federaalaatti ilaalamuu danda'a.
Yakkoonni akka maallaqa sobaa jijjiiranii baasuu yookiin ammoo ragaa namootaa iccitiidhaan baasuu akkasumas akkaataa cimina isaatiin yakki sadarkaa federaalaatti ni ilaalama.
Ameerkaa keessatti seerri adabbii du'aa bara 1972 hafee ture, ergasiimmoo bara 1976 hojiirra ooluu eegale, bara 1988 mootummaan seerri adabbii du'aa sadarkaa federaalaatti akka ilaalamu murteessee seera baase.
Ameerikaan bara 1988 fi 2018 gidduutti namoota 78 irratti adabbii du'aa murteessiteetti.
Garuu namoota sadi qofarratti adabbiin kun raawate.
Yeroo ammaa Ameerkaa keessatti namoonni adabbiin du'aa eeggatu namoota 62tu manneen hidhaa biyyattii keessa jiru.
Gosni Somaaliyaa murtii du'aa fi adabbii cimaan nagaa buusufi
Shakkamaan Toroontootti konkolaataadhaan namoota 10 fixe gaafatame